Basikety – Smatch’In 2016 : nanao pao-droa ary tompondaka ny Essca | NewsMada
Basikety – Smatch’In 2016 : nanao pao-droa ary tompondaka ny Essca
Norombahin’ny sekoly ambony Essca ny amboaran’ny “Smatch’In 2016”, taranja basikety, sokajy lahy sy vavy. Tontosa, omaly, tao amin’ny lapan’ny Fanatanjahantena Mahamasina mantsy ireo lalao famaranana lahy sy vavy rehefa nizotra nandritra ny herinandro ny hetsika. Nanao pao-droa ity sekoly ity, satria nalainy avokoa ireo amboara lehibe teo amin’ny lehilahy sy vehivavy.
Teo amin’ny vehivavy, tsy nisy nahasakana mihitsy ny lalan’ny Essca. Resin’izy ireo tamin’ny isa 89 noho 66 ny INTH teo amin’ny manasa-dalana ary nopotehiny tamin’ny isa mazava, 74 noho 55, ny Degs teo amin’ny famaranana. Tsy vitan’izay fa mpilalaon’izy ireo, Miora, ihany koa no voahosotra ho mpilalao mendrika tamin’ity andiany 2016 ity.
Ho an’ny lehilahy indray, somary tsy nampoizina ihany ny vokatra. Raha toa ka lavon’ny Essca tamin’ny isa 82 noho 76, taorian’ny fanalavam-potoana, ny INSCAE, teo amin’ny manasa-dalana, nomontsaniny tamin’ny isa 101 noho 89 ihany koa ny INTH teo amin’ny famaranana. Ny Degs, tompondaka farany kosa, tsy nahitam-bokatra tamin’ity. Ankoatra izay, voahosotra ho mpilalao mendrika i Ronald, mpilalaon’ny Essca ihany.
Etsy andaniny, maro ireo fampisehoana nandritra iny hetsika iny, toy ny fifaninanana “dunk”, ny “miss”, ny fandihizana isan-karazany, sns.